ကြက်တော - ဝီကီပီးဒီးယား
(ကြက်တော (သို့) ကြက်ပေါင်ခ မှ ပြန်ညွှန်းထားသည်)
ကြက်တော (သို့) ကြက်ပေါင်ခ
ကြက်တော သို့မဟုတ် ကြက်ပေါင်ခ သည် ကြက်တူရွေးငှက်အမျိုးအစား ဖြစ်သည်။ ကြက်တောသည် မြန်မာနိုင်ငံ၌ တွေ့ရသော ကျေးမျိုးများအနက် အကြီးဆုံး ဖြစ်သည်။ ကျေးဖောင်းကား ဟုလည်း ခေါ်သည်။
ကြက်သွေးရင့်ရောင် ပခုံးကွက်နှင့် အနီရောင်နှုတ်သီးရှိသော အစိမ်းရောင်ငှက်မျိုး ဖြစ်သည်။ အဖိုများတွင် လည်တိုင်နောက်ဘက်၌ ပန်းရောင်သန်း၍ မေးအောက်တွင် အနက်ရောင်သမ်းသော လည်ရစ်ရှိသည်။ ကိုယ်အလျားမှာ ၂၀"ရှိသည်။  ငှက်မနှင့် ငှက်ကလေးများတွင် အခြားကြက်တူရွေးများမှာကဲ့သို့ နှင်းဆီသွေးလည်ရစ်နှင့် နှုတ်ခမ်းမွှေးအနက်တို့ မရှိကြချေ။  ပေ ၃၀၀၀ ထိ လွင်ပြင်တောများနှင့် အင်တိုင်းတောများတွင် တွေ့ရသည်။  မြန်မာနိုင်ငံ မိုးခေါင် ရေရှားရပ်ဝန်းတွင် အများဆုံးတွေ့ရသည်။  လူကြောက်သည်။ "သရီးယူ ကေအ ကီအိတ် ဂရက် ဂရက် "ဟု ခေါ်သံပေးသည်။ ဒီဇင်ဘာမှ မတ်လအတွင်း သားပေါက်သည်။ ဌာနေငှက်ဖြစ်သည်။ 
ကြက်တော၏ အင်္ဂလိပ်အမည်သည် အလက်ဇန်းဒရင်းကျေးကျုတ်ဟု အဓိပ္ပါယ်ရသည်။ မဟာအလက်ဇန္ဒားဘုရင်ကို အစွဲပြုကာ အမည်မှည့်ခေါ်ထားခြင်း ဖြစ်သည်။ ယင်းဘုရင်သည် ပန်ဂျပ်ပြည်နယ်မှ ကြက်တောအများအပြားကို မြေထဲပင်လယ်နှင့်ဥရောပတိုင်းပြည်နှင့် ဒေသများစွာသို့ ယူဆောင်လာခဲ့သည်။ အဆိုပါနိုင်ငံများတွင် ကြက်တောကို မင်းမျိုးမင်းနွယ်များ၊ ဂုဏ်သရေရှိလူကြီး လူကောင်းများနှင့် စစ်ဘုရင်များက အထူးတန်ဖိုးထားကာ မွေးမြူကြသည်။ 
မျိုးစိတ်ခွဲငါးမျိုး ရှိသည်။ ပထမမျိုးကို အိန္ဒိယအနောက်ပိုင်းနှင့် တောင်ပိုင်း၊ သီရိလင်္ကာနိုင်ငံတို့တွင် တွေ့ရသည်။ ဒုတိယမျိုးကို အာဖဂန်နစ္စတန်အရှေ့ပိုင်း၊ ပါကစ္စတန်၊ အိန္ဒိယမြောက်ပိုင်း၊ အရှေ့ပိုင်းနှင့် အလယ်ပိုင်း၊ နီပေါ နှင့် ဘူတန်တို့တွင် တွေ့ရသည်။ တတိယမျိုးကို အိန္ဒိယအရှေ့မြောက်ပိုင်း၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နှင့် မြန်မာနိုင်ငံတို့တွင် တွေ့ရသည်။ စတုတ္ထမျိုးကို အက်ဒမန်ကျွန်းနှင့် ကိုကိုးကျွန်းတွင် တွေ့ရသည်။ ပဉ္စမမျိုးကို ဗီယက်နမ်၊ ကမ္ဘောဒီးယား၊ လာအိုနှင့် ထိုင်းနိုင်ငံတို့တွင် တွေ့ရသည်။
↑ del Hoyo, Josep; Nigel J., Collar; David A., Christie; Andrew, Elliot; Lincoln D.C, Fishpool (2014). HBW and BirdLife International Illustrated Checklist of the Birds of the World. Volume 1: Non-passerines. Barcelona: Lynx Edicions. ISBN 8496553949.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ကြက်တော&oldid=475459" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၇ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၉၊ ၁၄:၀၀ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။